Amathiphu okufihla impandla | Amadoda aSitayela
Amathiphu okufihla impandla
Amadoda aSitayela | | Ukunakekelwa komuntu siqu
Akukho lutho olubi ukwedlula ukuqala ukubona ukuthi izinwele zakho ziya zincipha, kepha akufanele ungene ekuphelelweni yithemba. Ukuhluzwa namuhla kuyimfashini futhi emazweni amaningana kuyindlela ebanda kunazo zonke.
Ezimweni eziningi, ukugeza izinwele zakho ngama-shampoo uthi uyisimangaliso futhi uphuza amaphilisi omlingo akusona isixazululo. Okufanele bakwenze-ke, ukuthi babe nesibindi futhi baphuce amakhanda abo, ngesitayela esihle kakhulu sikaBruce Willis.
Okwalabo abangafuni ukuthatha isiphetho sabo sokweqa, in Amadoda aSitayela Siyeluleka ukuthi kufanele babhekele lokho umuntu anakho. Lokho wukuthi, ungazami ukumboza iminyango bese uyikhombisa ngobude.
Ngaphezu kwalokho, kunconywa:
Ungalokothi udonse izinwele zakho phambili. Ungazami ukumboza ukungena ngezinwele. Ukuphela kwento etholakalayo ukuheha ukunakwa okuningi kuleyo ndawo. Kufana nokuba ne-herpes nokumboza umlomo wakho.
Ukuzama ukusika okusha kungasiza ukumboza leyo minyango ekuhlupha kakhulu.
Amadoda anokuthambekela kwempandla ajwayele ukuba nezinwele eziningi ngezansi kunezingaphezulu, lapho zikhula khona kancane. Kuyizinwele zenye ikhwalithi nokujiya. Ngalesi sizathu, kuyadingeka ukuthi kususwe ubuningi bezinwele kulayini we-cusp ukuze umehluko phakathi kwaphansi naphezulu kwekhanda kungabonakali kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Amathiphu okufihla impandla
Sawubona. Izinwele zami sekuphele unyaka ziwa. Kancane kancane, nsuku zonke ngithola izinwele emqamelweni wami. Manje sengisebenzisa i-shampoo entsha: i-garnier fructis stop loss. Kuhle, kuvimbela ukuwa!
Ngisebenzise uGarnier fructis, nodokotela wesikhumba wakhula kakhulu, naphezu kokwelashwa kwakhe, wabona ukuthi ayinikezi imiphumela, futhi wabuza ukuthi usebenzise ini, futhi ngiyamtshela ukuthi i-garnier, lapho eyikhumula wayifaka eyodwa ekhemisi, izinwele zami kuphume futhi, konke kuwugibe Abakumemezelayo uma ungabonisanga udokotela, lokho kuyafana nokuthi lokhu ngizinza kahle, uyazama? Yebo, okufanayo ngemikhiqizo yokuhlanza isikhumba nezinwele.
URetetto uhlobisa izicathulo zikaMichael Jackson zokudansa
Amasu okususa izinwele kumasende